Ketchup Matte Liquid Lipstick 700 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khin Pa Pa San (FB006158) Myo Nandar Aye (FB000478) Myo Thandar Aung (FB000047) Zin Mar Phyo (FB001278) Nay Chi (FB000459) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 700 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3) သိန်း (5) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 800 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent တွေကတော့ Hnin Wai Soe (FB000050) Thet Htar Wai (FB000144) Khin Myat Swe (FB000725) Su Mon Mon Zaw (FB000007) Nyo Nyo Mar (FB000719) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 800 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (3) သိန်း (6) သောင်း (5) ထောင် ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 900 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khin Yu War Htun (FB000023) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Khin Yu War Htun !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 900 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (4) သိန်း (3) သောင်း ကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Monthly Bonus ကို ဆပ်ပြာတုံး 2400 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent တွေ ကေတာ့ Myat Phoo Zaw (FB000018) Yin Myat Hlaing (FB001040) Zin Zin Yu (FB000530) တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Super Silver Agent တို့ !!! June လအတွင်း ဆပ်ပြာတုံး 2400 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်? Super Silver Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (7) သိန်း (8) သောင်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။